Wadooyinka isku xira deegaanada Koonfur Galbeed oo lafurayo – Radio Muqdisho
Wadooyinka isku xira deegaanada Koonfur Galbeed oo lafurayo
Ciidanka Xoogga dalka ee deegaanada koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa wada Qorshayaal kala duwan kuwaas Maleeshiyaadka Al Shabaab looga saarayo deegaanada ay ku sugan yihiin kuwaas oo ay dadka ku dhibaateeyaan.
Ciidanka ayaa jidadka xiran ee gobolada Bay, Bakool iyo Shabeellahaha hoose sidii loo furi lahaa ka shaqeynaya.
Jeneraal Cabdiraxmaan Maxamed Cismaan Timacade Taliyaha Qeybta 60-aad ee Ciidanka Xoogga dalka oo ku sugan magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay ayaa sheegay isaga oo wareysi siinayey Radio Muqdisho in ciidanku diyaar garow buuxa u galay sidii Argagaxisada dadka looga hor leexin lahaa.
Taliyaha ayaa dhanka kale waxaa uu tilmaamay in gobolka Shabeellaha hoose dhawaan laga bilaabi doono howgal safbalaaran ah kaas oo looga gol-leeyahay in Argagaxisada laga saaro meelaha ay ku dhuumaaleysanayaa.
Wafdi xildhibaanno ah oo deeq gaarsiiyay degmada Bardaale ee gobolka Baay+Sawirro